အဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ | Mycanvas
အဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
အဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် သင့်အဖွဲ့အစည်းအား မိမိတို့၏ပြိုင်ဘက်များထက် သာလွန်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ အဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်သောအခါတွင် သင်ခံစားနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကို ဆွေးနွေးကြပါစို့။
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၊ အဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်သောအခါတွင် စွမ်းဆောင်ရည် သိသိသာသာ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အသင်းသားတိုင်းက သူတို့ရဲ့ တာဝန်နဲ့ အလုပ်တွေကို သိနေတာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် အတွင်းရော အပြင်မှာပါ အာရုံပျံ့လွင့်မှု နည်းပါတယ်။
အဖွဲ့သားတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏တာဝန်များကို သိရှိနားလည်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ထံမှ မျှော်လင့်ထားသည့် သီးခြားထည့်သွင်းမှုနှင့် ရလဒ်များကို သိရှိနားလည်ကြပါတယ်။
2. အဖွဲ့များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
အခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် အလုပ်သမားများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အားပေးပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တော် အလုပ်သမားအတွက် နေရာမရှိပါ။
အချင်းချင်း လက်တွဲလုပ်ဆောင်သောအခါတွင်၊ သင့်အဖွဲ့သည် မိမိတို့အတွင်းတွင် ကောင်းမွန်သော အသိပညာနေရာတစ်ခုကို သင်ယူရန်နှင့် တည်ဆောက်ရန် အခွင့်ထူးရှိပါတယ်။ ဤသည်မှာ ဝန်ထမ်းအသစ်များကို အလုပ်သစ်များခေါ်ယူလေ့လာသင်ယူရန် တွန်းအားပေးရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းခွင်ထိရောက်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သော်လည်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေသည့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု လွန်ကဲနေခြင်းကို သင်သတိရှိရပါမည်။
3. မတူညီသော အယူအဆများ
အဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်းကြောင့် အဖွဲ့၀င်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင် မတူညီသော အတွေးအမြင်များ အဆက်မပြတ် စီးဆင်းနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကွဲပြားသော အယူအဆများနှင့် ထင်မြင်ယူဆချက်များသည် ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို ပေးဆောင်ပေးပါတယ်။
အဖွဲ့များကြားတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမြင်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဘောင်အပြင်ဘက်တွင် တွေးခေါ်မှုများကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ အထူးသဖြင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော တွေးခေါ်မှုနှင့် ပြတ်သားမှုလိုအပ်သည့် အလုပ်များအတွက်ဖြစ်သည်။
4. တိုးတက်သောအဖွဲ့အား တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခြင်း။
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေနှင့်၊ အဖွဲ့နှင့်တာဝန်များကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းကို စစ်မှန်စွာပါဝင်ကူညီကြသော အဖွဲ့၀င်များကို ခွဲခြားနားလည်သဘောပေါက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှုသည် ပရိုမိုးရှင်း၊ အခကြေးငွေဖြင့် အားလပ်ရက် သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆုလာဘ်တွင် လာနိုင်သည်။
ဝန်ထမ်းများ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် တန်ဖိုးထားလေးစားခြင်းသည် ဝန်ထမ်းများ၏ စေ့ဆော်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သော အကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ကြီးကြပ်မှုမရှိဘဲ ၎င်းတို့၏တာဝန်များကို ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ရန် ပို၍ စည်းကမ်းရှိစေသည်။